Laguna Minyke, Minikana lagoon - San Pedro de Atacama
Amerika Atsimo Shily San Pedro de Atacama
Adiresy: Valan-javaboarin'i Los Flamencos, Tany Atacama, Chilie;
Haavo ambonin'ny ambony ranomasina: 5 910 m;
Any avaratr'i Chili , ao amin'ny valan-javaboahary Los Flamencos, misy saha lehibe indrindra sy farihy voafantina fantatra amin'ny lokony manga sy mamiratra. Natao tamim-pahendrena ny natiora fa tokony hialokaloka ho an'ny biby sy ny vorona mihitsy aza na any amin'ny tany maina manerantany aza. Misy ampahan'olom-bolo toy izany eo amoron'ny farihy sira kely. Ny iray amin'ireo toerana ireo, izay tsy manam-paharoa amin'ny fahatsarany sy ny maha-izy azy, dia sarina farihy roa any amin'ny 4200 metatra ambonin'ny tany. Ny rivotra dia zara raha misy ary ny tsy fisian'ny oksizenina dia afaka mamolavola ny lohanao, fa ny mendrika dia mendrika izany! Tonga any Atacama ireo mpizaha tany mba hankafy ny fahanginana sy ny hatsaran-tarehy, mba hiala sasatra amin'ireo tanàn-dehibe. Ny fitsangantsanganana mankany amin'ny toeram-ponenana sy toerana hafa mahaliana ny tany efitra dia iray amin'ireo tanàna telo tena malaza sy mahaliana indrindra eto amin'ny firenena.
Ny fahitana ny lagoon Minigke
Laguna Minieke dia manintona ny hatsaran-tarehin'ny faritra manodidina. Ny làlana mankany aminy dia mitambolimbolina eo amin'ireo tendrombohitra sy volkano tsara tarehy, ka manome fahafahana ny mpandeha mba hankafy ny zavamaniry sy ny biby any amin'ny lembalemba avo Antiplano. Rehefa tonga ny fotoana, dia mahafinaritra ny toerana eo imason'ireo tendrombohitra mitsambikina ambony sy ny lagoon miaraka amin'ny rano madio mangatsiaka, izay manana tsiron-kena manokana. Mahatalanjona ny fahitana, satria maina ny tany efitra ary noho izany dia mazava tsara ny rivotra, izay tsy misy na aiza na aiza. Any akaikin'ny lagona dia ilay volkano majestic Minyke - vahindanitra maromaro, kôpà lava ary renirano. Mandeha eny akaikin'ny lagoon, izay rakotra sira ny valan-javamaniry sira, ka tsy atao afa-tsy amin'ny lalana voapetaka sy voamarika. Any amin'ny faritra manodidina no ahitanao ny andiam-bibidia vicuña - ireo solontenam-panjakana malaza indrindra amin'ny rameva, karazam-borona maro tsy fahita firy, mpihaza tendrombohitra sy gisa goose. Ny Lagoon Mignike dia matetika milanja rivotra, mikarakara akanjo mafana.
Ny Lagoon Mignike dia afovoan-kilometatra miala ny tanànan'i San Pedro De Atacama . Ny serivisy fiara fitaterana dia mampifandray azy ireo amin'ny tanàna Kalam (1.5 ora amin'ny bus na fiara) sy Antofagasta (4 ora fiara). Ireo tanàna ireo dia azo avy amin'ny sidina mivantana avy any Santiago . Ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra any an'efitra dia ao Calama. Ireo mpizahatany izay tsy matahotra ny dia iray kilaometatra lavitrisa dia afaka manararaotra ny sidina mivantana mankany Atacama avy any Chili renivohitra.
Ny tanànan'i Tokonao
Fasan'ny fitaovana ho an'ny tranon'ny firenena iray
Tanàna Krismasy ho an'ny vola, fitiavana ary vintana
Nicole Kidman dia nanaiky ny hitifitra amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra
Kitay ho an'ny trano manokana
Sakafo feno ovy ao anaty lafaoro
Ny rétin-dazan'ny havokavoka amin'ny zaza
Fombafomba ho fahatanterahan'ny faniriana
Ribok 2013 ho an'ny Vehivavy
Sakafo miaraka amin'ny oxaluria
Crab sticks - tsara sy ratsy
Azo atao ve ny mitaiza zaza?